Ungasoli i-CMS, Sola Umklami Wetimu | Martech Zone
Namhlanje ekuseni ngibe nocingo olukhulu nekhasimende engaba khona mayelana nabo amasu wokukhangisa angenayo. Babalule ukuthi bebehlangana nenkampani yokwenza i-webhusayithi yabo. Ngangibonile ngaphambi kocingo ukuthi base bevele bekhona WordPress ngabuza nokuthi bazoqhubeka yini nokuyisebenzisa. Uthe akunjalo neze futhi wathi kubi kakhulu ... akakwazanga ukwenza lutho ngesiza sakhe asifunayo. Namuhla ukhuluma nenkampani ezothuthukisa kwi-Expression Engine.
Bekumele ngichaze ukuthi sisebenze naye Injini Yokuchaza kabanzi, futhi. Sisebenze noJoomla, Drupal, I-MarketPath, Imavex kanye nezinye izinhlelo eziningi zokuphathwa kokuqukethwe. Ngenkathi ezinye izinhlelo ze-CMS bezidinga ukunakekelwa ngothando ukuze kusizakale zonke izinzuzo zokusesha nezenhlalo, sithole ukuthi amasistimu amaningi e-CMS enziwa alingana ngokulingana… futhi empeleni ahlukaniswa kuphela ngumsebenzi wokuphatha nokusebenziseka kalula.
Ngingazimisela ukubheja ukuthi leli klayenti lingenza noma yini elingathanda ukuyenza ku-WordPress. Inkinga akuyona i-WordPress, noma kunjalo, yindlela isihloko sakhe esakhiwe ngayo. Iklayenti elilodwa esiqale ukusebenza nalo muva nje yinkampani ye-VA Loan Refinance. Bayinkampani enkulu - ebuyisela imali ezinhlanganweni zosizo zomakadebona njalo lapho ziqoqa ukuthunyelwa. Yize senza ithoni ngokwezifiso ze-WordPress, sikholelwa ngokuphelele ukuthi iklayenti lingaba nesayithi elihle, elungiselelwe, nelisebenzisekayo cishe kunoma iyiphi i-CMS ngangokunokwenzeka kwi-WordPress. I-WordPress imane ithandwa kakhulu manje ngakho-ke sizithola sisebenza kakhulu kuleyo platform kunabanye.
I-VA Loan ithenge ingqikithi yangokwezifiso yabe isiqasha ukuthuthukisa izindlela zabo zokucinga nezenhlalo. Itimu ibiyinhlekelele… ingasetshenziswa imigoqo eseceleni, amamenyu, noma amawijethi. Yonke into ibinekhodi enzima kuthempulethi yabo ngaphandle kokusebenzisa noma yiziphi izici ezinhle ezifakwa yiWordPress. Sichithe izinyanga ezimbalwa ezilandelayo sakha kabusha ingqikithi, sihlanganisa Gravity Amafomu nge-Leads360, futhi bathuthukisa iwijethi ebuyisa amanani entengo yemalimboleko yakamuva azokhonjiswa kusayithi labo ebhange labo.
Le yinkinga ehlelekile ngabaqambi bengqikithi nama-ejensi. Baqonda ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi isayithi libukeke lihle, kepha hhayi ukuthi ungayisebenzisa kanjani ngokugcwele i-CMS ukufaka zonke izici ezahlukahlukene iklayenti elingazifuna kamuva. Ngibonile iDrupal, Injini Yokuchaza, Inkululeko ye-Accrisoft, nezindawo zeMarketPath ezazizinhle futhi zisebenziseka… hhayi ngenxa ye-CMS, kodwa ngenxa yokuthi inkampani eyakha itimu ibinolwazi olwanele lokufaka zonke izici ze-CMS ezisiza ukusesha, ezenhlalo, amakhasi okufika, amafomu, njll. kuyadingeka.
Umklami wetimu omuhle angakha itimu enhle. Umklami wetimu omkhulu uzokwakha itimu ongayisebenzisa eminyakeni ezayo (futhi uthuthe kalula ngokuzayo). Ungasoli i-CMS, usole umklami wetimu!
Tags: CMSuhlelo lokuphatha okuqukethweDrupalamafomu adonsela phansiimamexmarketing kwangaphakathiUkuhlanganiswaI-joomlaimaketheindaba ephathwayoukwakheka kwetimuWordPress
Isipikili ekhanda. Sakha ama-90% amahle wamaphrojekthi wethu nge-WordPress futhi kunezikhathi lapho uzozwa khona imibono enjengale nezinto ezifana nokuthi "Well, it cannot do __________". Impendulo eyiyo eyiyo, “Uma kungekho okuthile okukhona laphaya okuvumelana nezidingo zakho (ingqikithi kanye / noma ama-plugins), futhi uma unjiniyela wakho azi ukuthi angayisebenzisa kanjani i-API, ungenza noma yini enhle ofuna ukuyenza inqobo nje uma isikhathi bese usenza isabelomali lapho. ”
Kepha kwesinye isikhathi iklayenti linomqondo walo ugxile kokuthile "okusha", ngakho-ke kungenzeka ukuthi ugoqa nalo noma ulwenqaba.
Kuyathakazelisa lokho. Ngemuva kokuqala umsebenzi eReusser Design, ngishintshele kakhulu ekusebenzeni ngaphakathi kwe-EE, i-CMS yethu yokuzikhethela, kusuka ku-WordPress, ebengisebenza nayo ikakhulu lapho ngingedwa. Ngingavumelana nawe kuzindikimba zami ze-WP kwenza umehluko. Okuthile okunjengethi WooTheme's Canvas theme, ngokwesibonelo, kwakukuhle kakhulu ukusebenza ngaphakathi, kuyilapho kukhona amanye ama- "premium" nezindikimba ezingokwezifiso ezikhona nje ezi- icky.
Uma kushiwo lokho, ngiyayithanda impela i-EE yokuphathwa kokuqukethwe kwewebhusayithi, ezimweni lapho “ukubhuloga” kungeyona into ephambili. Ilula, yinhle, futhi inamandla kakhulu kune-WP, ngicabanga. Noma kunjalo, uma wenza ukubhala okuningi noma ukubhuloga ngaphakathi kwe-CMS yakho, akukho lutho oludlula ulwazi lomsebenzisi lwe-WP lwalowo mbhali.
Siyabonga ngokuthunyelwe kwakho!
@awelfle: disqus Nginenkinga kancane uma kukhulunywa nge-EE, nakanjani ibhalwe kakhulu ngabathuthukisi be-MVC. Ngalokho engqondweni, ngiyaqonda ukuthi ukuthuthuka kunobungane futhi kuyashesha futhi akuyona inkinga enkulu kangako. Njengoba ngingazicabangi njengonjiniyela osemthethweni, ngivame ukunamathela ezintweni ezilula ezingadingi ukucatshangelwa okuningi (kepha ngokwethembeka kungadala umonakalo omkhulu!).
Leli sayithi libukeka njengenguqulo eguquliwe ye-TwentyEleven. Ingabe kunjalo? Kunoma ikuphi, uqinisile; kumayelana nengqikimba, hhayi i-CMS. Kepha i-WordPress, i-IMHO, iyipulatifomu engcono kakhulu yokusebenza nayo ngalesi sikhathi.
Iso elihle, @jonschr: disqus! Ingqikithi yeTwentyEleven eguqulwe kakhulu… siyiklebhule ngempela! Asikaze nje sifihle wonke amagama wetimu. Futhi sithanda iqiniso lokuthi sinikeza abantu abalungile ku- @Wordpress: qeda ukunakwa okufanele.
Ngenxa yelukuluku: Ngize lapha ngekhasi eliqondile le-HTML elifika kulokhu okuphakelayo. Kungani ungazihlanganisi ngqo? Lokho kungenye ye-WordPress 'enkulu engidonsela yona; izifanekiso zamakhasi ezehlukile kunoma yiliphi ibanga olikhethayo.
Sawubona @jonschr: disqus - belikuphi ikhasi lokufika? Sishicilela izixhumanisi eziya kumasayithi afana nalawa http://www.corporatebloggingtips.com kepha ngifuna ukugxila kuthrafikhi emthonjeni owodwa. Kungcono ngibe nawo wonke umgwaqo lapha, ngicindezele igunya lalesi sizinda, futhi ngiqinisekise ukuthi noma iziphi izixhumanisi zibuyisele emuva lesi sizinda ngezinjini zokusesha. Ngiyethemba yilokho okushoyo! Uma ngishicilela ezizindeni eziningi, ngiyahlukanisa lelo gunya… ngincamela ukuba nesayithi eliqinile eli-1 kunokuba ngibe nababili ababuthaka.
Yebo, nguyena lowo! Hmm. Kunengqondo… Noma kunjalo-ke, kungani ungamane wenze “ikhasi lokufika” libe ikhasi lenkomba lalesi siza? Alikho icala elenzelwe lokho; ngizibuze nje ukuthi yini inzuzo. Ngithanda ikhasi lokufika, i-BTW. Kuhle kakhulu.
@jonschr: disqus alikho icala elenziwe nhlobo! Ungamangala ukubona ukuthi leso yisayithi le-WordPress, futhi. Futhi kukhona ithani lamakhasi angaphakathi abonakalayo ezinjini zokusesha. Ngesikhathi kukhishwa incwadi, bekuyinto evamile ukuba nesayithi lekhasi lokufika ngqo lencwadi. Bengifuna ukuba nesizinda esenzelwe kuphela "ukubhuloga ezinkampani" futhi sisebenze kahle. Bengifuna okuqukethwe kuvuselelwe kaningi kusayithi kepha bengingafuni ukuthi ngibhale enye ibhulogi ngokuphelele - ngakho-ke ukudonsa kokuphakelayo, ukuxhumana kwezenhlalo, nokukusebenzisa njengekhalenda lemicimbi kukugcina kushintsha njalo. Ima kahle kakhulu ngamatemu amaningi ngakho-ke yawenza umsebenzi futhi yaqhubeka nokusidayisela izincwadi!